LDRS တွေ ချစ်သူကိုအလွမ်းဖြေရင်း ကြည့်သင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်(၃)ကား - For her Myanmar
LDRS တွေ ချစ်သူကိုအလွမ်းဖြေရင်း ကြည့်သင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်(၃)ကား
အလွမ်းဓာတ်ခံတွေ ပိုအုံကြွလာအောင် နှိုးဆွပေးလိုက်ပါပြီရှန်
ယောင်းတို့မျှော်နေကြတဲ့ movie review နေ့လေးပြန်လည်ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ stella က LDRS တွေ အးအေးဆေးဆေးဖီးလ်လို့ရမယ့် ရုပ်ရှင်ကားကောင်းလေးတွေ ပြောပြသွားပေးမှာပါ။
အမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့က စစ်သား John ကခွင့်နဲ့ မွေးရပ်မြေကို ပြန်လာတဲ့အခါ ကံကြမ္မာလို့ပဲပြောရမလား … ကောလိပ်ကျောင်းသူလေး Savannah ကိုတွေ့ပြီး မြင်မြင်ချင်းချစ်မိသွားပါတယ်။ ခွင့်ရက်စေ့လို့ John စစ်ထဲပြန်ဝင်သွားရတဲ့အခါ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ရေးက စာပေးစာယူအဆက်အသွယ်ပဲရှိတော့တာပေါ့။ တစ်နေ့ကျတော့ Savannah ရဲ့စာမှာ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးကို အဆုံးသတ်လိုက်ရအောင်လို့ပဲ ပါလာပါတော့တယ်။ ဘာလို့ Savannah က အဆုံးသတ်ချင်ရတာလဲ၊ သူတို့နှစ်ယောက်ပြန်ပေါင်းစည်းနိုင်မှာလား၊ နှစ်ယောက်လုံး ဘာတွေစွန့်လွှတ်ရမှာလဲဆိုတာတွေကို Dear John မှာ ကြည့်ရမှာပါ။ မင်းသားချော Channing Tatum နဲ့ မင်းသမီးချော Amanda Seyfried တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး နာမည်ကျော် အချစ်ဝတ္ထုစာရေးဆရာ Nicholas Sparks ရဲ့ ဝတ္ထုကို ပြန်ရိုက်ကူးထားတာမို့ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်နော်…
Related article >>> ယောင်းကို မျက်ရည်ခြူမယ့် အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် (၃) ကား
စာအုပ်အရောင်းဆိုင်လေးကို မနည်းလည်ပတ်အောင်လုပ်နေရရှာတဲ့ Kathleen ဟာ သူ(မ)ဆိုင် မျက်စောင်းထိုးကို ပြောင်းလာတဲ့ အကြီးစားစာအုပ်အရောင်းဆိုင်ပိုင်ရှင် Joe ကို အသေအလဲမုန်းသူပါ။ ဒါပေမဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်က အမည်မသိလူနှစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆက်သွယ်မိကြတဲ့အခါမှာတော့ ချစ်ကြိုးသွယ်မိပါတော့တယ်။ တစ်နေ့တော့ Joe က သူချစ်မိနေတဲ့အမျိုးသမီးဟာ သူရဲ့စီးပွားပြိုင်ဖက်ဖြစ်နေကြောင်း သိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့ရဲ့အချစ်ရေးက ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမှာလဲ၊ Kathleen သိသွားရင်ကော Joe ကို ပိုမုန်းသွားမှာလား၊ Joe ကကော စီးပွားပြိုင်ဘက်ဆိုတာနဲ့ ချစ်ရသူဆိုတာကြားမှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ ကြုံရမလဲဆိုတာတွေကို ရယ်ရယ်မောမောကြည့်နိုင်မှာပါ။ မင်းသားကြီး Tom Hanks နဲ့ Meg Ryan တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာမို့ မလွတ်တမ်းကြည့်သင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။
Related article >>> မင်းသားကြီး Tom Hanks ရဲ့ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကို မြင်ရမယ့် ရုပ်ရှင် (၃) ကား
ချီကာကိုမြို့ရဲ့ စာကြည့်တိုက်မှူး Henery က အတိတ်ကိုကော အနာဂတ်ကိုကော သွားနိုင်တဲ့ အချိန်ခရီးသွားတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့အချိန်ခရီးတစ်ခုမှာပဲ Claire နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပြီး လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်တည်း တစ်နေရာတည်းမှာ မနေနိုင်တဲ့ Henery ရဲ့ အချိန်ခရီးသွားကျင့်ကြောင့် သူတို့အိမ်ထောင်ရေးမှာ အဖုအထစ်လေးတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ …. သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ရေးက သာယာနိုင်မှာလား၊ ဘယ်လိုပြဿနာတွေ ဖြစ်လာဦးမှာလဲ၊ အချိန်ခရီးသွားတဲ့အကျင့်ကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာကို Time Traveler’s Wife ရုပ်ရှင်မှာ ကြည့်ရှူခံစားရမှာပါ။ သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ Eric Bana နဲ့ Rachel McAdams ဖြစ်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ယောင်းတို့အနေနဲ့ အသည်းစွဲဖြစ်စေမှာပါ။
Related article >>> သမီးရည်းစား၊ လင်မယားကြားက ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အပြည့်အဝ ဖော်ကျူးပြထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်း (၃) ကား
ကဲ … ဒီလောက်ဆိုရင် LDRS ယောင်းတို့ ပိတ်ရက်မှာ ချစ်သူကိုအလွမ်းဖြေရင်းကြည့်ဖို့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းလေးတွေ တိုးလာပြီပေါ့နော်။ နောက်တစ်ပတ်မှာ ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာရုပ်ရှင်လေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဦးမလဲဆိုတာ သိချင်ရင်တော့ Stella ပို့စ်တွေကို စောင့်ဖတ်ပေးပါဦးလို့…
အလှမျးဓာတျခံတှေ ပိုအုံကွှလာအောငျ နှိုးဆှပေးလိုကျပါပွီရှနျ
ယောငျးတို့မြှျောနကွေတဲ့ movie review နလေ့ေးပွနျလညျရောကျရှိလို့လာပါပွီ။ ဒီတဈခေါကျမှာတော့ stella က LDRS တှေ အးအေးဆေးဆေးဖီးလျလို့ရမယျ့ ရုပျရှငျကားကောငျးလေးတှေ ပွောပွသှားပေးမှာပါ။
အမရေိကနျအထူးတပျဖှဲ့က စဈသား John ကခှငျ့နဲ့ မှေးရပျမွကေို ပွနျလာတဲ့အခါ ကံကွမ်မာလို့ပဲပွောရမလား … ကောလိပျကြောငျးသူလေး Savannah ကိုတှပွေီ့း မွငျမွငျခငျြးခဈြမိသှားပါတယျ။ ခှငျ့ရကျစလေို့ John စဈထဲပွနျဝငျသှားရတဲ့အခါ သူတို့နှဈယောကျရဲ့ အခဈြရေးက စာပေးစာယူအဆကျအသှယျပဲရှိတော့တာပေါ့။ တဈနကေ့တြော့ Savannah ရဲ့စာမှာ သူတို့နှဈယောကျရဲ့ ဆကျဆံရေးကို အဆုံးသတျလိုကျရအောငျလို့ပဲ ပါလာပါတော့တယျ။ ဘာလို့ Savannah က အဆုံးသတျခငျြရတာလဲ၊ သူတို့နှဈယောကျပွနျပေါငျးစညျးနိုငျမှာလား၊ နှဈယောကျလုံး ဘာတှစှေနျ့လှတျရမှာလဲဆိုတာတှကေို Dear John မှာ ကွညျ့ရမှာပါ။ မငျးသားခြော Channing Tatum နဲ့ မငျးသမီးခြော Amanda Seyfried တို့က ပါဝငျသရုပျဆောငျထားပွီး နာမညျကြျော အခဈြဝတ်ထုစာရေးဆရာ Nicholas Sparks ရဲ့ ဝတ်ထုကို ပွနျရိုကျကူးထားတာမို့ ကွညျ့ဖွဈအောငျကွညျ့နျော…
Related article >>> ယောငျးကို မကျြရညျခွူမယျ့ အကောငျးဆုံးရုပျရှငျ (၃) ကား
စာအုပျအရောငျးဆိုငျလေးကို မနညျးလညျပတျအောငျလုပျနရေရှာတဲ့ Kathleen ဟာ သူ(မ)ဆိုငျ မကျြစောငျးထိုးကို ပွောငျးလာတဲ့ အကွီးစားစာအုပျအရောငျးဆိုငျပိုငျရှငျ Joe ကို အသအေလဲမုနျးသူပါ။ ဒါပမေဲ့ အှနျလိုငျးပျေါက အမညျမသိလူနှဈယောကျအနနေဲ့ ဆကျသှယျမိကွတဲ့အခါမှာတော့ ခဈြကွိုးသှယျမိပါတော့တယျ။ တဈနတေ့ော့ Joe က သူခဈြမိနတေဲ့အမြိုးသမီးဟာ သူရဲ့စီးပှားပွိုငျဖကျဖွဈနကွေောငျး သိလိုကျရတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့ရဲ့အခဈြရေးက ဘာတှဆေကျဖွဈလာမှာလဲ၊ Kathleen သိသှားရငျကော Joe ကို ပိုမုနျးသှားမှာလား၊ Joe ကကော စီးပှားပွိုငျဖကျဆိုတာနဲ့ ခဈြရသူဆိုတာကွားမှာ ဘယျလိုအခကျအခဲတှေ ကွုံရမလဲဆိုတာတှကေို ရယျရယျမောမောကွညျ့နိုငျမှာပါ။ မငျးသားကွီး Tom Hanks နဲ့ Meg Ryan တို့ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတာမို့ မလှတျတမျးကွညျ့သငျ့တဲ့ ရုပျရှငျကားကောငျးတဈကားပါ။
Related article >>> မငျးသားကွီး Tom Hanks ရဲ့ အကောငျးဆုံး သရုပျဆောငျခကျြတှကေို မွငျရမယျ့ ရုပျရှငျ (၃) ကား
ခြီကာကိုမွို့ရဲ့ စာကွညျ့တိုကျမှူး Henery က အတိတျကိုကော အနာဂတျကိုကော သှားနိုငျတဲ့ အခြိနျခရီးသှားတဈယောကျပါ။ သူ့ရဲ့အခြိနျခရီးတဈခုမှာပဲ Claire နဲ့တှဆေုံ့ခှငျ့ရခဲ့ပွီး လကျထပျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တဈခြိနျတညျး တဈနရောတညျးမှာ မနနေိုငျတဲ့ Henery ရဲ့ အခြိနျခရီးသှားကငျြ့ကွောငျ့ သူတို့အိမျထောငျရေးမှာ အဖုအထဈလေးတှေ ဖွဈလာတဲ့အခါ …. သူတို့နှဈယောကျရဲ့ အခဈြရေးက သာယာနိုငျမှာလား၊ ဘယျလိုပွဿနာတှေ ဖွဈလာဦးမှာလဲ၊ အခြိနျခရီးသှားတဲ့အကငျြ့ကွောငျ့ ဖွဈလာတဲ့ဆိုးကြိုးတှကေ ဘာတှလေဲဆိုတာကို Time Traveler’s Wife ရုပျရှငျမှာ ကွညျ့ရှူခံစားရမှာပါ။ သရုပျဆောငျတှကေတော့ Eric Bana နဲ့ Rachel McAdams ဖွဈပွီး စိတျကူးယဉျဇာတျလမျးကောငျးလေးတှေ ကွိုကျနှဈသကျတဲ့ ယောငျးတို့အနနေဲ့ အသညျးစှဲဖွဈစမှောပါ။
Related article >>> သမီးရညျးစား၊ လငျမယားကွားက ခဈြခွငျးမတ်ေတာကို အပွညျ့အဝ ဖျောကြူးပွထားတဲ့ ရုပျရှငျကားကောငျး (၃) ကား
ကဲ … ဒီလောကျဆိုရငျ LDRS ယောငျးတို့ ပိတျရကျမှာ ခဈြသူကိုအလှမျးဖွရေငျးကွညျ့ဖို့ ရုပျရှငျကားကောငျးလေးတှေ တိုးလာပွီပေါ့နျော။ နောကျတဈပတျမှာ ဘယျလိုစိတျဝငျစားစရာရုပျရှငျလေးတှနေဲ့ မိတျဆကျပေးဦးမလဲဆိုတာ သိခငျြရငျတော့ Stella ပို့ဈတှကေို စောငျ့ဖတျပေးပါဦးလို့…
Tags: actor, Actress, LDRS, Movie, movie geek, review
အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုကာကွယ်ဖို့ Green Tea ရွေးမလား? Tea Tree Oil ကိုရွေးမလား?
Stella March 28, 2019
Phyu Thant May 13, 2019
ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် တသောသောရယ်နေစေရမယ့် ဟာသရုပ်ရှင် (၃) ကား
FA တွေကို ယောက်ျားယူချင်စိတ် ပေါက်အောင် လုပ်သွားတဲ့ လင်းရိကျိုး (သို့) တရုတ်မင်းသားချော Xu Kai Cheng အကြောင်း တစ်စေ့တစောင်း
Ei Mon May 7, 2019